नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : "नारायणहिटी सफा गरेर राजा बस्ने ठाउँ मिलाउ" प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लाई चुनौती दिँदै कमल थापाले भने !
"नारायणहिटी सफा गरेर राजा बस्ने ठाउँ मिलाउ" प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लाई चुनौती दिँदै कमल थापाले भने !
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नारायणहिटी सफा गरेर राजा बस्ने ठाउँ मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजसंस्था फर्कने निश्चत भएको भन्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटीमा राजाकै हैसियतमा बस्ने ठाउँ मिलाउन आग्रह समेत गरे । अध्यक्ष थापाले कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरुले गर्ने आन्दोलनमा जनता नआउने समेत बताए । देशमा निर्वाचन भएपछि आमूल परिवर्तन हुने भावनाका साथ अघि बढे मात्रै नागरिक सडकमा आउने उनको भनाई छ ।
Posted by www.Nepalmother.com at 10:58 AM